राजपामा दुर्इ नेताको टक्कर, कस्ले हाँक्ने संसदीय दल? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
राजपामा दुर्इ नेताको टक्कर, कस्ले हाँक्ने संसदीय दल?
आकाश क्षेत्री काठमाडौं चैत २२
राजपा नेपालका नेताहरु
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो पक्षधर सांसदहरु आफू निकटको नेता संसदीय दलको नेता चयन गराउन लबिंग तीब्र पारेका हुन्। ठाकुर निकट नेताहरूले राजपालाई बलियो बनाउन अध्यक्ष मण्डलका संयोजकलाई बलियो बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
बुधबार बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुको बैठकबाटै संसदीय दलको नेतामा ठाकुर र महतोको चर्चा भएको हो। बिहीबार बसेकाे पार्टीकाे संसदीय दल बैठकमा पनि याे विषयमा छलफल भएकाे छ।
'बैठकले संसदीय दलको नेता चयनका लागि विधान तथा नियमावली बनाउन लझ्मणलाल कर्णलार्इ जिम्मा दिने निर्णय गरेकाे छ', राजपाका एक नेताले नेपालखबरसँग् भने, 'सांसदबाट मासिक १० हजार लेवी उठाउने र रेशम चौधरीलार्इ सपथग्रहण गराउन सरकारलार्इ दबाब दिने निर्णय भएकाे छ।'
तीन वटा निर्णय गरेकाे बैठकले संसदीय दलकाे नेता चुन्न पेचिलाे अवस्था अाइपरेपछि नियमावली बनाउनतर्फ लागेकाे हाे। नियमावलीमा नेता चयनको प्रक्रिया तथा मापदण्ड उल्लेख हुनसक्ने बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपालखरलार्इ बताए।
उनका अनुसार राजपा जस्तो आधा दर्जन अध्यक्ष भएको पार्टीमा कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णयका लागि निर्वाचनमा नै जानुपर्ने भएकाले संसदीय दल नेता चयनका लागि पनि निर्वाचन हुने नहुने विषयमा छलफल हुन लागेको हो।
संसदीय दलमा महतोको वर्चश्व
प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर राजपासँग जम्मा १७ सांसद छन्। चुनाब हुने स्थिति अाएमा महताे सहजै संसदीय दलकाे नेता बन्ने अवस्था राजपा संसदीय दलमा छ। प्रत्यक्षबाट अाएका ११ सांसदमध्ये ६ जना महतो र ४ ठाकुर पक्षका छन्।
तत्कालीन समयमा महतोले नेतृत्व गरेको सद्भावना पार्टी निकट रहेर काम गरेकाले अहिले पनि महतोसँग निकट मानिएका चार सांसद हुन् लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रमोद साह, चन्द्रकान्त चौधरी र रेशमलाल चौधरी। कैलाली घटनाकाे अाराेपमा रेशम थुनामा रहेकाले उनले संघीय संसदको सपथ लिन पाएका छैनन्। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झा र राजकिशोर यादव पनि महतो निकटै छन्।
तत्कालिन समयमा ठाकुर नेतृत्वको तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी निकट रहेर काम गरेका एकबाल मिया ठाकुरकै पक्षमा छन् भने राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिहं भण्डारी, महेन्द्रराय यादव पनि उनकै पक्षमा देखिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ४ सांसद मध्ये २ महतोको पक्षमा र २ ठाकुरको पक्षमा छन्। महताको पक्षमा अमृता अग्रहरि, नरमाया ढकाल र पुरानो नेपाल सद्भावना पार्टीमा आवद्ध रहेकी रानी मण्डल रहेकी छन्। ठाकुरको पक्षमा चन्दा चौधरी र दुलारी देवी खाँण निर्जला राउत रहेका छन्।
भिड्ने पक्षमा छैनन् ठाकुर
संसदीय दलको नेता चयनका लागि राजपामा सहमतिमै दलको नेता चयन गर्ने कोशिस भएको केही नेता बताउँछन्। महतो निकट केही नेताहरू राजपामा परिर्वतन ल्याउन संसदीय दलको नेतामा निर्वाचनबाटै महतोलाई विजयी बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
ठाकुर पक्षका नेताहरुले सहमतिबाटै संसदीय दलको नेतामा ठाकुरलार्इ चयन गर्ने धारणा राखेका छन्। तर, ठाकुर पक्षले दलको नेता चयनका लागि वैशाख दोस्रो हप्तातिर निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएकाे छ।
दलको नेता चयनका लागि हुने उक्त निर्वाचनमा राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कुनै रुचि देखाएका छैनन्। उमेरका कारण नेतृत्व क्षमता कम भएको उनी आफैले पछिल्ले समय महसुस गरेको उनी निकट नेताहरुले बताउँछन्। पदका लागि लड्ने भिड्ने काममा नलाग्ने पनि उनल आफू निकट नेताहरुलार्इ बताउँदै आएका छन्।
ठाकुर र महतोबीच राजपा गठन हुँदा मिलेर पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने सहमति भएपनि पार्टी अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व ठाकुरले नै गरिरहेका छन्। दुर्इ महिनामा अध्यक्ष फेरिने सहमति अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षमा महतोले अहिलेसम्म उक्त पदको दाबी नगरेकाले अध्यक्षकाे कार्यकार ठाकुरले नै चलाइरहेका हुन्।
प्रकाशित २२ चैत २०७४, बिहिबार | 2018-04-05 22:17:09